Roa andro izay no lasa hatramin’ny nitaingenan’i Jesosy zana-boriky niditra tao Jerosalema. Talata izao. Teo amin’ny fiandohan’ny andro dia tao amin’ny tempoly i Jesosy. Tao ny mpisorona dia nitady hihazona azy mba hamono azy. Nefa natahotra ny hanao izany izy ireo satria tian’ny olona i Jesosy.
‘Ry bibilava, taranaky ny menarana!’ Izany no niantsoan’i Jesosy an’ireo filoha ara-pivavahana. Avy eo dia nilaza i Jesosy fa hanasazy azy ireo Andriamanitra noho ny zava-dratsy rehetra nataony. Taorian’izany dia tonga teo amin’ny Tendrombohitra Oliva i Jesosy, ary nanomboka nametraka fanontaniana taminy ireo apostoly efatra ireo. Fantatrao ve izay nanontaniany an’i Jesosy?
Hizara Hizara Teo Amin’ny Tendrombohitra Oliva
my tant. 98